टिकटक स्टार सिया क`क्कडको उनकै छिमेकी ले ज्या`न लिएको खुलासा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/टिकटक स्टार सिया क`क्कडको उनकै छिमेकी ले ज्या`न लिएको खुलासा !!
एजेन्सी – टिकटक स्टार सिया क क्कडको देह त्यागको खबरले धेरैलाई आश्च`र्यमा पार्यो । उनले किन यस्तो कदम उठाइन् भनेर कसैले अझ सम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । सिया सामाजिक सञ्जा`लमा निकै सक्रिय रहने गर्थिन् । उनी निककट भवि`ष्यमा नै ठूलो प्रोजे`क्टमा देखिने तयारीमा थिइन् तर उनले यस्तो गरिन् । उनले देह त्याग गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि टिकटकमा केही भिडियो शेयर गरेकी थिइन् । ती भिडियो अहिले सा`माजिक सञ्जा`लमा निकै भाइरल भइरहेका छन् ।
पछिल्लो अनुस`न्धानका अनुसार टिकटकमा भाइरल भएकी सियालाई विभिन्न प्रकारका ध म्की आइरहेका थिए । यद्यपि, उनको घटनाको विषयमा प्रहरीले केही तथ्य बाहिर ल्याएको छैन । स्टार शिवानीको उनकै सैलूनभित्र उनकै साथीले ज्यान लिएका छन् ।
आरोपी आरिफले शिवानीको ह त्या गरेपछि उनको मोबाइल प्रयोग गरे । शिवानी बनेर उनकी कान्छी बहिनी भारतीलाई मेसेज गरे । जब भारतीले आमा बिरामी हुनुहुन्छ घर कहिले आउँछौ भनेर सोध्दा उनको मेसेजबाट आफू हरिद्वारमा भएको र मंगलबारसम्म फर्किसक्ने जवाफ आएको थियो । परिवारले पनि उनी आरिफसँग हरिद्वारमा गएकी होलिन् भनेर पत्याए । पिता विनोद, आमा गीता, बहिनी श्वेताले आरिफले शिवानीलाई तनाव दिने गरेको बताए ।